Halyeey kooxda Chelsea ah oo doortay kan fiican daafacyada Nemanja Vidic iyo van Dijk – Gool FM
Halyeey kooxda Chelsea ah oo doortay kan fiican daafacyada Nemanja Vidic iyo van Dijk
Dajiye March 18, 2020
(England) 18 Mar 2020. Halyeeyga kooxda kubadda cagta Chelsea ee Frank Leboeuf ayaa doortay kan wanaagsan daafaca haatan Liverpool ee Virgil van Dijk iyo Nemanja Vidic daafacii hore Manchester United.
Nemanja Vidic ayaa kula guuleystay kooxda Manchester United horyaalka Premier League 5 jeer iyo hal jeer oo ah tartanka Champions League ah, halka Virgil van Dijk uu la qaaday Liverpool koobka Champions League hal jeer xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, wuxuuna qarka u saaranaa yahay in loo caleemo saaro koobka Premier League xilli ciyaareedkan, kahor inta aan la joojin horyaalka sababa la xiriira faafitaanka caabuqa Coronavirus.
Haddaba Frank Leboeuf ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caalamiga ah ee “ESPN” waxaa lagu weydiiyay su’aal ah keebaa wanaagsan van Dijk iyo Vidic?, wuxuuna ku jawaabay:
“Waxaan dooran doonaa Virgil van Dijk sababtoo ah waa nin dhameystiran, waan jeclaaday Nemanja Vidic, sababtoo ah waa daafac aad u fiican, balse Van Dijk wuxuu awood u leeyahay inuu hoggaamiyo kooxda”.
“Uma maleynayo in Nemanja Vidic uu awoodo inuu sidaas sameeyo, Koofiyadeyda ayaan kor u qaadayaa.”
Si kastaba ha noqotee, Daafaca reer Holland ayaa ka qeyb qaatay kooxda Liverpool 41 kulan tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkaan tartamada oo dhan, wuxuu dhaliyay afar gool, halka 2 gool kalena uu caawiyay.
Dhulgariir ku dhuftay Magaalada uu ka soo jeedo Cristiano Ronaldo, xilli laacibka Juve uu qol halkaas ku yaala isku karaantiilay!